လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုဖြင့် နယူးယောက်မြို့တော်ဝန်ကိုမို ရာထူးမှ နုတ်ထွက် - Xinhua News Agency
ဗီဒီယိုရုပ်သံမှတဆင့် ပြောကြားနေသော နယူးယောက်မြို့တော်ဝန် အင်ဒရူးကိုမိုအား ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဩဂုတ် ၁၀ ရက်ကတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
နယူးယောက် ၊ ဩဂုတ် ၁၁ ရက်(ဆင်ဟွာ)
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားနှောက်ယှက်မှုစွပ်စွဲချက် နှင့် အခြားသော နိုင်ငံရေးသမားများက ယင်းကိစ္စအပေါ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရန် ဖိအားပေးမှုများဖြင့် ကြုံတွေ့နေရစဉ်အတွင်းမှာပင် နယူးယောက်မြို့တော် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အင်ဒရူးကိုမို(Andrew Cuomo) သည် ၎င်းအနေဖြင့် ရာထူးမှနုတ်ထွက်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ဩဂုတ် ၁၀ ရက်တွင် ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ကိုမို၏ ရာထူးမှ နုတ်ထွက်မှုသည် ၁၄ ရက်အတွင်း အသက်ဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ၎င်း၏ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရာထူး ကျန်ရှိနေသော သက်တမ်းအတွက် ဒုတိယပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Kathy Hochul က လွှဲပြောင်းတာဝန်ယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကိုမိုက ၎င်းအနေဖြင့် “ မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ အကူအညီပေးရာ မရောက်သည့်အဖြစ်ကို” မလိုလားကြောင်း နှင့် လက်ရှိအခြေအနေအတွက် အခြားတစ်ဖက်သို့ ခြေလှမ်းလိုက်ခြင်း(ရာထူးမှနုတ်ထွက်လိုက်ခြင်း)ဖြင့် အကောင်းဆုံးအကူအညီပေးရာ ရောက်နိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
နယူးယောက် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးက ကိုမိုအား လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားနှောက်ယှက်မှု နှင့် COVID-19 ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာများနှင့်ပတ်သက်၍ မှားယွင်းစွာပြုမူဆောင်ရွက်ခဲ့မှု တို့ဖြင့် စွပ်စွဲပြစ်တင်ရန် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။
နယူးယောက်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးလက်အောက်ရှိ တရားစီရင်ရေးကော်မတီက ယင်းစွပ်စွဲမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ သက်သေခံချက်များအပေါ် ခုခံချေပရန်အတွက် ကိုမိုအနေဖြင့် ၎င်းကိုယ်တိုင် ယခုသောကြာနေ့တွင် လာရောက်ထွက်ဆိုရန် ရက်သတ်မှတ်ပေးထားသည်။
ကိုမိုသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်အတွင်း အမျိုးသမီးပေါင်းများစွာကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခဲ့ကြောင်း နယူးယောက်မြို့တော်အစိုးရရှေ့နေချုပ် Letitia Jam က ခန့်အပ်ထားသည့် လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများ၏ မကြာသေးခင်က ထုတ်ပြန်သော အစီရင်ခံစာတစ်ရပ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
သို့သော်လည်း ကိုမိုက လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှု စွပ်စွဲချက်များအား ငြင်းဆိုထားပြီး “ ကျွန်တော်ဘယ်တုန်းကမှ မလုပ်ခဲ့ပါဘူး ၊ မိန်းကလေးတွေကို ဂုဏ်သိက္ခာမဲ့စေတဲ့လုပ်ရပ်မျိုး ဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူး ၊ ဘယ်အမျိုးသမီးတွေကို မဆို ကျွန်တော်ကောင်းကောင်း မွန်မွန်ပြုမူဆက်ဆံပါတယ်” ဟု ပြောကြားထားသည်။(Xinhua)
NEW YORK, Aug. 10 (Xinhua) — New York Governor Andrew Cuomo on Tuesday said he was resigning amid mounting pressures from sexual harassment allegations and investigations as well as calls from other political figures.
The resignation would take effect in 14 days and Lieutenant Governor Kathy Hochul would become the governor for the rest of Cuomo’s term.
However, Cuomo has been denying sexual harassment accusations, saying that “I never did and I never would intentionally disrespectawoman, treat any woman differently than I would want them treated.” Enditem
Photo taken fromavideo in New York, the United States, shows New York Governor Andrew Cuomo speaking duringatelevised address, on Aug. 10, 2021.